Haratsian’ireo mpanao lalàna pro-Beijing ao Hong Kong ho “mahamenatra” ny hetsika Gay Games · Global Voices teny Malagasy
Ahitana mpandray anjara 12.000 avy amin'ny firenena manerantany ny lalao
Voadika ny 11 Jolay 2021 13:37 GMT
Pikantsary avy amin'ny horonantsary fampiroboroboana ny Gay Games HK. Screen capture from Gay Games HK promotion video.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia kinova amin'ny teny Anglisy ny tatitra amin'ny teny shinoa roa navoaka tao amin'ny Stand News tamin'ny 10 Jona 2021. Navoaka niaraka tamin'ny fanovana tao amin'ny Global Voices izany araka ny fifanaraham-piaraha-miasa ara-botoaty.
Mangataka amin'ireo manampahefana eo an-toerana ireo depiote pro-Beijing any Hong Kong mba tsy hiditra amin'ny fanomanan'ny tanàna ny lalao Gay Games Hong Kong (GGHK) amin'ny 2022, milaza ny fitomboan'ny fanahian'ny Antoko Komonista Shinoa amin'ny fironana momba ny lahy sy ny vavy.
Nahazo ny tolo-bidy hampiantrano ny Gay Games – hetsika ara-panatanjahantena sy kolontsaina iraisam-pirenena izay mampiroborobo ny fandeferana manoloana fahasamihafana ara-nofo ny vondrom-piarahamonina LGBT Hong Kong tamin'ny taona 2016.
Raha mitohy ny hetsika dia ity fotoana voalohany hanaovana ny lalao any Azia tao anatin'ny efa-polo taona niatombohany voalohany tao San Francisco.
Nanohana ity drafitra ity ireo sampan-draharaham-panjakana maromaro, anisan'izany ny Invest Hong Kong sy ny Biraon'ny Fizahan-tany ao Hong Kong. Satria hahitana mpandray anjara 12.000 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny lalao ary antenaina indrindra hampiditra vola mitentina 1 miliara $ HK (129 tapitrisa dolara) ho an'ny tanàna.
Manantena mpijery hatramin'ny 75000 avy amin'izao tontolo izao ny mpikarakara ny GGHK.
Na eo aza izany adihevitra izany dia nilaza mazava ny tsy fankasitrahan'izy ireo an'io hetsika io ny depiote Priscilla Leung sy Junius Ho nandritra ny fotoam-pivoriana tamin'ny 9 jona tao amin'ny Vaomieram-panaovan-dalàna Hong Kong (Legco).
Junius Ho nilaza hoe:
… manohitra ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy ireo mponina manohana ahy. Raharahanao izay ataonao ao amin'ny efitranonao manokana, fa raha mivoaka ianao ary manao izany imasom-bahoaka dia mahamenatra … aorian'ny Lalao Gay, ny dingana manaraka dia ny fanaovan-dalàna ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. Tsy tokony hidiran'ny tompon'andraiki-panjakana izany. Asan'ny fiarahamonim-pirenena izany raha te-hanao izany izy ireo, saingy tsy mety [ho an'ny governemanta] ny manary vola amin'izany. Tsy te-hahazo vola maloto toy izany aho, tsy maninona na mahazo 1 miliara $ HK aza izahay.
Nanaiky i Priscilla Leung, nanamarika fa tsy resaka fanatanjahan-tena loatra ny lalao fa fampielezan-kevitra hampiroboroboana ny zon'ny LGBT, izay nambarany fa mety hampisara-tsaina ny fiarahamonina.
Nilatsaka ny fanehoan-kevitr'izy ireo taorian'i Regina Ip Lau Suk-yee, mpanao lalàna iray hafa, niantso ny governemanta mikasika ny tokony hanaovana fanampiana bebe kokoa ho an'ireo mpikarakara ny Lalao Gay mba hiarovana ireo toerana ilainy. Naneho ny fanohanany ny tolo-bidy i Ip hatramin'ny taona 2016.
Hong Kong liberaly, saingy mandra-paoviana?
Mampiseho ny ankamaroan'ny olona manohana ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy ary ny fiarovana ara-dalàna ny zon'ny LGBT ny fanadihadiana natao tany Hong Kong tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Saingy manohana ny soatoavina mpandala ny nentin-drazana kokoa miaraka amin'ny fifandraisana lahy sy vavy sy ny fiterahana eo anivon'ny fikambanana sosialy ny mpanohana ireo mpanao lalàna pro-Beijing any Hong Kong. Mifanaraka amin'ny politikan'ny fanabeazana momba ny maha-lahy na vavy ao Beijing tato anatin'ny taona vitsivitsy ny fomba fijery toy izany.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanoratra tolo-kevitra momba ny politika hampiroboroboana ny maha-lehilahy ny tovolahy, ao anatin'ny lahateny notarihin'ny fanjakana miampanga ny “fanindrahindrana ny vehivavy” ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena. Nitaraina matetika ny haino aman-jerim-panjakana sy ny mpomba ny governemanta momba ny lazan'ny lahy kintan'ny mozika sy ny sarimihetsika malaza amin'ny hatsaran-tarehin'izy ireo “manahirana”.
Na dia tsy mbola nisy aza hatramin'izao ny mariky ny fikasan'ireo mpanapa-kevitra ao Hong Kong hanakana ny fanatanterahana ny GGHK, miatrika fanamby ara-pampitaovana miharihary ireo mpikarakara.
Hatramin'izao, tsy nahita afa-tsy ny antsasaky ny toerana 56 ilain'izy ireo amin'ny lalao ny GGHK.
Raha tsy misy ny fanampian'ny fikambanan'ny fanatanjahantena nasionaly vatsian'ny governemanta ara-bola, dia avela hamandrika toerana fanaovana fanatanjahantena enim-bolana mialoha ny GGHK fa tsy 12 volana.
Hatramin'ny herintaona, nirehareha amin'ny fananana ilay mpanao lalàna tokana miseho ampahibemaso fa pelaka ao Azia Atsinanana i Hong Kong – ny mpanao lalàna mahaleotena Raymond Chan Chi-chuen, izay niditra tao amin'ny Legco tamin'ny taona 2012. Nandao ity andry ity tamin'ny herintaona i Chan Chi-chuen ho fanoherana ny zavatra hitany ho fiezahan'i Beijing hilalao ilay andry. Mbola eo am-pelatanan'ny polisy izy noho ny fiampangana fampisaraham-bazana.
Nahatonga ny Legco nanala tanteraka ny feon'ny mpanohitra ny fametraham-pialàna faobe nataon'ireo mpanao lalàna mpomba ny demaokrasia tamin'ny volana novambra lasa teo noho ny fanapahan-kevitr'i Beijing hanala ny efatra tamin'ireo mpiara-miasa aminy .
Avo lenta ny fanohanana ny fanambadian'ny pelaka ao HK, saingy satria tsy manana fahafahana hanana mpanao lalàna izay misolo tena tokoa ny vahoaka intsony isika, dia ao anatin'ny dingana fiantsoana ara-bakiteny ny olona pelaka ho ‘maloto’ ny adihevitra
Marika fotsiny ho an'ny Tanàn-dehibe Fantatra Taloha hoe Tanànan'Izao Tontolo Izao ao Azia ny fanenjehana sy fanagadran'i HK ireo mpanao politikany hajaina indrindra & liam-pandrosoana indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao no sady mampiroborobo ny fitondrana ataon'ny “tia tanindrazana” toa an'i Junius Ho izay mampiely ny fankahalana toy izao
Nanatevin-daharana ny media sosialy ireo vondrona LGBT + eo an-toerana mba hamelaka ny fanehoan-kevitr'ireo mpanao lalàna prô-Beijing.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Hong Kong Free Press, nilaza ny talen'ny Parade Pride Hong Kong, Wylie Yeo hoe:
Tena manohana tokoa ny fiarahamonim-pirenena, tena manohana tokoa ny LGBT ny olom-pirenena … Tsy mbola nanana orinasa marobe nanohana ny Volan'ny Fireharehana raha tsy tamin'ity taona ity izahay… ny olona sisa tavela ao amin'ny Filankevitra Mpanao lalàna no tsy voakasika… izy ireo no mampizarazara an'i Hong Kong. Ny zava-misy ankehitriny dia satria navadik'izy ireo sy namboarin'izy ireo ny rafi-pifidianana LegCo ho lasa ‘firenena iray, rafitra iray’, ny fako mpankahala pelaka toa azy ireo ihany no sisa tavela ao amin'ny LegCo.
Nanome toky i Ricky Chu, mpitari-draharaha ao amin'ny Vaomieram-panjakana ho an'ny Fitovian'ny Hirika, fa hanohy hanome fanampiana ho an'ny mpikarakara ny vaomierany, ary nanentana ny vahoaka izy mba tsy hanao tsinontsinona ireo lalao.